SADC Inoyambirwa Kurega Kukurumidza Kurumbidza Sarudzo Mudunhu Rayo
Sangano remubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC riri kukurudzirwa kuti riregedze kukurumidza kuti sarudzo dzinenge dzitwa mudunhu dzafamba zvakanaka pasati panyatsopenengurwa zvinenge zvaitika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti SADC kazhinji inongotambira zvinenge zvabuda musarudzo kunyanya kana zvichitsigira mapato ari kutonga.
MuZimbabwe, SADC inonzi yakakurumidzazve kuti sarudzo dzainge dzakachena asi ikozvoino kana ZEC iri kutenda kuti yakaresva mukuverenga mavhoti.
Bato rinopikisa reMDC Alliance rakabva rakwira kudare reConstitutional Court richiti sarudzo dzainge dzabirirwa zvemhando yepamusoro soro. Nyaya yekutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika yakabva yasendekwa parutivi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDehwa Mavhinga vanoti vanhu vanofanira kumira kutaura nezvenyaya iyi kusvika dare rapa mutongo waro.